US oo kaalmo siineysa shacabka Qaza - BBC Somali
Image caption Caruurta Qaza ee duqeynta ay saameysay
Dadaalada diblumaasiyeed ee la doonayo in xabad joojin looga gaaro dagaalka Qaza ayaa la xoojiyay.
Xoghayaha guud ee Qaramada midoobey, Ban Ki-moon, ayaa magaalada Qaahira kula kulmay Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, John Kerry, waxayna kawada hadleen joojinta duqeynta Israel ee Qaza.
Mr Ban ayaana markale ku baaqay in si degdeg ah oo shuruud la’aan ah loo aqbalo xabad joojinta.
Mr Kerry ayaa dhankiisa tilmaamay in mareykanka uu ka walaacsan yahay badbaadada shacabka Falastiiniyiinta. Wuxuuna intaa ku daray in Mareykanka uu gargaar bini’aadamnimo oo gaaraya 47 milyan oo dollar in u diri doono Marinka Qaza.
Image caption Qaza, Falastiin
Xubin ka mid ah waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay xaaladda sii adkaaneyso, ayna qaadan karto dhowr maalin in lagu guuleystay joojinta dagaalka.
Hogaamiyayaasha Falastiiniyiinta ayaa dhankooda ka shiraya qorshaha xabad joojinta.
Dhanka kale, Hay’adda Qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa sheegtay, in kabadan 100 kun oo qof inay megan gelyo u galeen xarumaheeda kuwaas oo ka baxsanaya duqeynta Israel ee Marinka Qaza.
Image caption Cisbitaal Qaza ku yaalla oo la duqeeyay
Image caption Dadka ku dhintay duqeymaha Qaza
Dad Falastiiniyiin ah ayaa sheegaya in shalay shan qof ay ku dhinteen duqeyn loo geystay Cisbitaal, 11 kalana ay dhinteen ka dib markii diyaaradaha Israel ay duqeeyeen meel ay dad rayid ah degan yihiin.
Maamulka Israel ayaa dhankooda sheegay in todoba askeri oo dheeraad ah inay uga dhinteen Marinka Qaza.